Gbasara anyị - Beijing Landwell Electron Technology Co., Ltd.
Brauza gị anaghị akwado na mkpado vidiyo.
Site na isi ndebanye aha nde 20, e hiwere Landwell na Beijing na 1999 wee kpuchie mpaghara ọfịs 5000. Ọ bụ akara ama ama na ụlọ ọrụ nchekwa yana osote onye isi oche nke China Security Association. Na ọkwa izizi, LANDWELL mepere ngwa ngwa dabere na ihe ọhụụ na ịdebe ikike ikike ọgụgụ isi zuru oke yana ụdị nnwere onwe akpaghị aka "Landwell". O wuru nke kachasi elu na ndi njem nche na usoro ọgụgụ isi nke ọgụgụ isi na ndị isi na R&D, mmepụta, ire ahịa na ahịa. Ebe ọ bụ na 2003 landwell e tọrọ ntọala alaka na itieutom na mba, na shanghai, Shenzhen, Nanjing, Hangzhou, Wuhan,
Changsha, Zhengzhou, Xi'an, Chengdu, Yantai, Shenyang, Xinjiang wdg, abụọ R&D emmepe na otu software center. Dika onu ogugu onu ogugu site na mgbasa ozi na ubi, ihe ndi Landwell na ahia na teknụzụ di na mbu abughi No1 maka otutu oge na China ma buru ndi isi nke uwa. Ngwaahịa gụnyere nche nche patrol, ọgụgụ isi patrolling usoro, ụlọ ọrụ patrol usoro, ọgụgụ isi isi management usoro, elu-ọgwụgwụ akwara ohere akara, ọgụgụ isi mgbochi na-ezu ohi ezinụlọ na ngwaahịa. Na iche iche iche iche nke ngwaahịa na ọhụrụ technology, anyị na ngwaahịa e exported na ihe karịrị 50 mba na mpaghara dị ka United States, Germany, UK, France, Russia, Japan, Brazil, Singapore, South Africa, Poland, South Korea na na .
Kemgbe 1999, Landwell nwere afọ iri na isii mmepe mmepe; Edepụtara dị ka otu n'ime ndị na-edepụta akwụkwọ nke "National Industry Standards of Guard Tour System",
Onye isi oche nke China Security Association worldlọ ọrụ ama ama na mpaghara njirimara njirimara.
Ulo oru di egwu nwere ikike ikike ofnye onu ahia;
Ama ama ama na China.
Mbụ oke nke nche patrolling usoro, ọgụgụ isi isi management usoro;
Dabere na ịkwụwa aka ọtọ: ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide dabere na ịtụkwasị obi.
N'ịbụ ndị nwere obi eziokwu nye ndị mmadụ: ọ bụ omume ọma nke mmadụ, ntọala nke azụmahịa. Anyị niile na-esi ọnwụ na ị payinga ntị na ntụkwasị obi na idobe ezi okwukwe nye ndị ahịa, ndị ọrụ ibe. Ego bara uru, mana ikwenye ya kariri.
Igodo Isi Nchịkwa, Ikwado Key Box, Nchịkọta Nchịkọta Obere Igbe na Igodo, Igbe maka Igodo Igodo, Nnukwu Stolọ Nche Nchekwa, Mkpọchi Key Cabinet,